ဧရာဝဏ်​ရိပ်​သာ၊ 60'x60'၊ RC-2+BN-2,MB-3,BR-2,Ph,ဂရန်​​မြေ ​ရောင်းရန်​ရှိပါသည်​။
သာ​ကေတမြို့နယ်​၊ ဧရာဝဏ်​လမ်းမအနီး၊ ဧရာဝဏ်​ရိပ်​...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-6636496 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကမာရွတ်၊ အင်းယားလမ်းအနီးရှိ လုံးချင်းမြေကွက်အား ရောင်းရန်ရှိသည်။
***🏠🏠 🏠 House For Sale 🏞️🏞️🏞️ *** 🔯 Near Inya Road, Kamayut Township. 🔯...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-6531312 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
01 510600, 095040160, 09 5185534, 09 5173690
Near (10) Mile Market
(23'x86’) 3RC, 4M, 8A/C, G...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-6620398 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
01-8603566 / 09-443165656 / 09-443065656 / 09-400329089
အသင့်နေထိုင်နိုင်သော တိုက်ခန်းအား ရောင်းမည်။
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရတနာလမ်းအနီးတွင် (19x55)အကျယ်ရှိ ဒုတိယထ...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-6608436 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
* အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ * * Area - 1250sq * 1 Master bedroom ,2Sin...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-5202097 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09 444030038, 09 43109890, 09 73144949, 09 73197959, 01 2301566.
(၇)မိုင်၊ကုန်းမြင့်ရိပ်သာတွင် အသင့်နေထိုင်နိုင်သော လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်။
** (၇)မိုင်၊ ကုန်းမြင့်ရိပ...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-6520765 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
01 510600, 095040160,095185534,095173690
*13* ​တောင်​ဥက္ကလာပမြို့နယ်​ 14ရပ်​ကွက်​ သံသုမာလမ်းမအနီး ရပ်​ကွက်​အသန့်​ 30×50 အကျယ်​ 1RC , M1 , Ac1 2300သိန်းနဲ့​ရောင်းမှာပါ ညှိနှိုင်း​ဈေးပါ...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-6634810 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သမိုင်းဘူတာရုံလမ်းမကြီး အနီး တိုက်ခန်း အမြန်ရောင်းရန်ရှိသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-6634801 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မြေနီကုန်း ဂမုန်းပွင့် ရှေ့ တိုက်ခန်း အမြန်ရောင်းရန်ရှိသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-6634784 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် မာဃလမ်းတွင် ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်း ရောင်းရန်ရှိသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-6634776 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် မင်းရဲကျော်စွာ လမ်းတွင် ပထမထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-6634757 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် မေတ္တာလမ်းမပေါ်တွင် mini condo အခန်းလေးရောင်းရန်ရှိသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-6634734 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-6634706 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ကျွန်းတောလမ်းအနီးတွင် ၁၃×၅၀ ပေရှိ ၅လွာတိုက်ခန်း ရောင်းရန်ရှိသည် တိုက်သစ်...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-6634685 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
mini condo တိုက်သစ်ရောင်းမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-6634675 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-6634656 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မေတ္တာရောင်ခြည် အိမ် ခြံ မြေ တိုက်ခန်း ကွန်ဒို အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း ပိတ်ရန်